जापानद्वारा ४ अर्ब ५३ करोड अनुदान सहयोग » खबरहरुको एउटै केन्द्र
जापानद्वारा ४ अर्ब ५३ करोड अनुदान सहयोग
बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ११:१७ मा प्रकाशित !
४ फागुन, काठमाडौँ । जापान सरकार पोखरामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु चार अर्ब ५३ करोड ९० लाख अनुदान सहयोग गर्न सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले सम्झौता पत्रममा हस्तारक्षर गरे।
उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा जापानले उपलब्ध गराउने अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले सम्झौता गरे। खानेपानी संस्थानले कार्यान्वयन गर्ने उक्त आयोजनाअन्तर्गत पानी प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी वितरण प्रणालीको सुधार, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मिटरलगायत काम हुनेछ ।
सन २०२२ मा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनापछि ४० करोड २० लाख लिटर पानी प्रतिदिन वितरण हुनेछ । परियोजना समापनपछि चार लाख पाँच हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन । सो अवसरमा अर्थ सचिव सुवेदीले जापान नेपालको मुख्य विकास साझेदार भएको उल्लेख गर्दै खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा आगामी दिनमा पनि सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले परियोजना कार्यान्वन भएपछि पोखराका जनता सहज रुपमा स्वच्छ पानी पिउन पाउने उल्लेख गर्दै पोखराको जनजीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: राप्रपाले महाधिवेशनमा एक करोड ५० लाख खर्च गर्ने
NEXT POST Next post: वैशाखभित्रै चुनाव हुन्छः-प्रधानमन्त्री दाहाल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ११:१७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ११:१७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ११:१७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ११:१७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, फाल्गुन ४, २०७३ ११:१७